अब हराएको लाईसेन्सको सिफारिस बनाउन ट्राफिक कार्यालय धाउनु नपर्ने ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/अब हराएको लाईसेन्सको सिफारिस बनाउन ट्राफिक कार्यालय धाउनु नपर्ने !
अब हराएको लाईसेन्सको सिफारिस बनाउन ट्राफिक कार्यालय धाउनु नपर्ने !
काठमाडौं । हराएको सवारी चालक अनुमति पत्र (लाईसेन्स), सवारी दर्ता किताब र सवारी ईजाजत पत्रको सिफारिस लिनका लागि ट्राफिक कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताको ट्राफिक महाशाखाले अन्त्य गरेको छ । अब घरबाटै अनलाइन फाराम भरेर सेवाग्राहीले उक्त सिफारिस बनाउन सक्नेछन् ।
महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भिम ढकालले हराएको लाईसेन्स, बिलबुकर पर्मिटको लागि धेरै दिन लगाएर सेवाग्राही ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको बताए ।
सिफारिस रिपोर्ट आवश्यक पर्ने व्यक्तिले अब ट्राफिक प्रहरीको वेबसाइट
traffic.nepalpolice.gov.np मा गएर फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ । वेबसाइट खोलेपछि दायाँतर्फ लस्ट डकुमेन्टस एप्लिकेसन (Lost Document Application) मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि माग भएबमोजिम सेवाग्राहीले आफ्नो विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ ।
माग भएअनुसार सबै विवरण (Submit) वा भरिसकेपछि सेवाग्राहीलाई एप्लिकेसन नम्बर प्राप्त हुन्छ । सेवाग्राहीले अनलाइनबाट फाराम भरेको २४ घण्टापछि सिफारिस पाप्त गर्न वा लिन सक्नेछन । यसको लागि सेवाग्राहीलेउक्त एप्लिकेसनमा रहेको चेक एप्लिकेसनमा क्लिक गरी दिएको एप्लिकेसन नम्बर, पुरा नामथर र डकुमेन्ट्स नम्बर राखेर सिफारिस रिपोर्ट लिन सक्नेछन र उक्त सिफरिस रिपोर्टको प्रिन्ट लिएर यातायात कार्यालयमा गई आफ्नो लाईसेन्स वा सवारीको डकुमेन्ट बनाउन सकिनेछ ।
आफैले बनाएको हेलि-कप्टर उडाउन खोज्दा युवकको मृ xत्यु, सैयौं क्यामेरा खिचिरहेका थिए भिडियो (भिडियो हे`र्नुस्)
पुर्व डिआईजी रमेश खरेलले आज नयाँ दलको घोषणा गर्दै, दलको नाम राखे यस्तो
लुटेर खाएको सबै निकाल्छु भन्दै काठमाडौंको मेयर उठ्ने तयारीमा पूर्वडिआइजी रमेश खरेल